Nacaybka UNWTO ee WTTC waxaa ku jira Sawirka Jacaylka ee Tweeted
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Nacaybka UNWTO ee WTTC waxaa ku jira Sawirka Jacaylka ee Tweeted
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Sacuudi Carabiya Warka • Wararka Spain • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Julia Simpson, oo ah maamulaha cusub ee WTTC, iyo Zurab Pololikashvili, Xoghayaha Guud ee UNWTO, waxay ku wada raaxaysanayeen casho fiican London.
Kani wuxuu ahaa nuqulkii loogu talogalay sawir uu bartiisa Twitterka soo dhigay la -taliyaha UNWTO Anita Mendiratta.
Nasiib darro tani maahan sheekada oo dhan.
Waxaa la isku qabsaday Maribel Rodriguez, Ku -xigeenka Wakiilka Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka.
Iyada oo Sacuudi Carabiya ay kor u qaadeyso suurtagalnimada dib-u-soo-kabashada dalxiiska adduunka oo si wanaagsan loo maalgeliyey, siyaasadda la aasaasay ee ah in la iska indho-tiro qaybaha gaarka loo leeyahay iyo maqnaanshaha isku-dubaridka COVID-19 ee waqtigeeda ee UNWTO ma sii waarto.
Cadhada diidmada WTTC ee xoghayihii guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili oo ku dhashay Ritz Carlton Hotel Riyadh ayaa u baahan dayactir degdeg ah.
La -taliyahii ugu sarreeyey iyo lataliyihii labadii xog -haye ee UNWTO, Anita Mendiratta, ayaa u soo gurmatay iyada oo aan sawir aad u qurux badan ka muuqan oo ay ka qaaday maqaayad raaxo leh oo London ku taal.
Dalxiiska ayaa ku jira dhibaato, dhammaan daneeyayaasha iyo Dowladda oo wada shaqeynaya ayaa ah waddada kaliya ee horay loo mari karo. UNWTO waxay ahayd marka laga reebo weyn.
Aragtidaani waxay ahayd inay is beddesho iyadoo Sacuudigu diyaar u yahay inuu hormuud ka noqdo xaaladdan oo uu gadaal ka dhigo lacagtii, balaayiin doollar oo loo qoondeeyay gacan keliya inay caawiyaan dhaqaalaha dalxiiska adduunka.
Sida sheeko basaasnimo, UNWTO Zurab Pololikashvilli, oo uu hoggaaminayo lataliyihiisa ugu sarreeya, Anita Mendiratta, ayaa tallaabo qaaday. Zurab wuxuu had iyo jeer ku fiicnaa hoggaaminta ku salaysan aragtida. Adigoo adeegsanaya magaca wanaagsan ee Maamulaha WTTC ee aan la ogeyn, mashiinka dacaayadda Zurab waa la daaray, waana la qabtay.
Xusuusnow? Tani waxay ahayd May 2017
Xoghayaha Guud ee UNWTO, Taleb Rifai, ayaa si qoto dheer ugu mahadceliyay Golaha Socdaalka & Dalxiiska Adduunka (WTTC) iskaashiga xooggan ee ka dhexeeya labada urur.
Lixdii sano ee la soo dhaafay, UNWTO iyo WTTC waxay abuureen iskaashi xooggan, oo isu keenaya qaybaha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay si ay u hormariyaan dalxiiska iyo inay wax ka qabtaan mudnaanta ugu muhiimsan.
Warqad furan oo UNWTO iyo WTTC ah oo ku saabsan Hindisaha Socdaalka iyo Dalxiiska oo la bilaabay 2011, ayaa taageero laga helay in ka badan 80 Madaxda Dawladda iyo Dawladaha adduunka oo dhan. Qorshahan, UNWTO iyo WTTC waxay hiigsanayaan inay sare u qaadaan muhiimadda waaxda dalxiiska ee horumarinta loo dhan yahay ee dhaqan-dhaqaale ee heerka ugu sarreeya.
Iskaashigan ka dhexeeya UNWTO iyo WTTC wuxuu ahaa mid xooggan ilaa 31-ka Diseembar, 2017. Iyadoo la ogaaday muhiimadda iskaashi dowladeed iyo mid gaar loo leeyahay waaxda, waxay muhiim u ahayd Xoghayaha Guud ee xilka ka sii degaya, Taleb Rifai, inuu casuumo agaasimaha cusub ee WTTC, Gloria Guevara, si uu uga qaybgalo Shirka Guud ee UNWTO ee Chengdu, China, 2017.
Maamulaha WTTC ee 2017, Gloria Guevara, wuxuu ahaa Wasiirka Dalxiiska ee Mexico sanadkii 2011. Meksiko waxay noqotay dalkii ugu horreeyay bishii Febraayo 2011 iyadoo Madaxweynaha Mexico Calderon uu saxiixay hindisaha dalxiiska UNWTO/WTTC oo la dhigay 80 madax dowladeed oo adduunka ah.
Wasiirka Dalxiiska ee Mexico, Gloria Guevara, oo ka timid warshadaha gaarka loo leeyahay, ayaa si cad u fahamtay muhiimadda ay leedahay in labada qaybood (kuwa gaarka ah & kuwa guud) ay wada shaqeeyaan.
Lama ogeyn 2017 in Xoghayaha Guud ee UNWTO ee dhowaan la doortay, Zurab Pololikashvili, uu lahaa qorshayaal kala duwan, mana aysan ku darin WTTC.
Sidee UNWTO isku beddeshay hal habeen Janaayo 1, 2018
Bishii Janaayo 1, 2018 Zurab Pololikashvili ayaa qabtay hoggaanka UNWTO.
Saddex sano ka dib khubarada ayaa isku raacay, waxay ahayd inuusan waligiis awoodin inuu sidan sameeyo.
Maareynta UNWTO si loo xaqiijiyo dib u doorashada Xoghayaha Guud Zurab Pololikashvili ayaa sii socota.
Waa maxay sababta Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Polokashvili aan si habboon loo dooran?
Xog-hayaha Guud ee UNWTO ee imanaya oo ka hor u shaqaynayey UNWTO wuxuu ahaa safiirka Madrid ee dalkiisa, Jamhuuriyadda Georgia, wax khibrad ah uma lahayn waaxda gaarka loo leeyahay iyo dalxiiska.
Iyada oo Zurab uu hoggaanka u hayey UNWTO, IATA, ICAO, iyo WTTC ayaa lumiyay meeshoodii.
Sanadkii 2018 UGolaha Guud ee NWTO ee St. Petersburg, Russia, Zurab ayaa meesha ka saaray inta badan qorshayaashii loogu talagalay WTTC si loogu hawlgalo ajandaha rasmiga ah wuxuuna ka dhigay madaxa WTTC inuu fadhiisto qolka gadaashiisa.
Zurab wuxuu ku guuldareystay inuu ku boorriyo bandhiga safarka Isbaanishka, FITUR, si aan loogu casuumin WTTC sanadka 2019.
Zurab wuxuu rabay in WTTC Global Summit ee May 2021 ee Cancun uu fashilmo waxayna ku riixday Dowladda Jamhuuriyadda Dominican inay jadwal u sameyso dhacdo goboleed UNWTO si ay uga hor timaaddo taariikhaha Shirka WTTC.
Waxaa la yaab leh Madaxa WTTC Gloria Guevara ayaa ku casuuntay Zurab inuu yimaado oo ka hadlo kulanka, laakiin, dabcan, taasi ma dhicin. Xubnaha WTTC way cadhoodeen, oo tayuu Wasiirka Dalxiiska ee Jamhuuriyadda Dominican raaligelin ka bixiyay waxaana dib loo dhigay dhacdadii UNWTO.
Tani waxay ahayd May 27, 2021, Riyadh, Saudi Arabia
Xafladdii oqalinka xarunta gobolka ee UNWTO ee Riyaad, Sacuudi Carabiya, Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili waxaa ku weheliyay Her Royal Highness Princess Haifa Al-Saud, Wasiir ku-xigeenka Dalxiiska Istaraatijiyadda iyo Maalgashiga, iyo Wasiirka Dalxiiska Boqortooyada, Mudane Ahmed Al Khateeb si rasmi ah u furto xafiiska.
Waxa kale oo iyaguna ku soo biiray Wasiirrada Dalxiiska oo ka kala yimid Bariga Dhexe iyo gobol kasta oo kale oo caalamka ah, iyo weliba hoggaamiyeyaal ka socda waaxda gaarka loo leeyahay.
Mudane. Wasiir Edmund Bartlett oo ka socda Jamaica iyo Hon. Wasiir Najib Balala ayaa ka qeyb galayay munaasabadda, markii Zurab Pololikasvili uu sababay goob lagu arkay hoteelka 5-xiddig ee Ritz Carlton Hotel ee Riyadh.
Waa maxay sababta Zurab uu ugu aflagaadeeyay Maribel Rodriguez?
Zurab wuxuu cod dheer ku dalbaday in aan WTTC lagu casuumin ka qaybgalka furitaanka Xarunta Gobolka UNWTO ee Riyadh, Saudi Arabia May 26, 2021
Sidaas darteed Madaxweyne ku -xigeenka WTTC, Maribel Rodriguez, ayaa qabanqaabiyaha ka codsaday inuusan ka soo qeyb gelin xafladda. Hal mar, Zurab wuxuu ku hanjabay inuu ka tagi doono munaasabadda isaga iyo wafdigiisa 80 qof haddii Maribel Rodriguez oo ka socda WTTC loo oggolaado inuu soo galo.
Maribel Rodriguez wuxuu si rasmi ah u matalayay Gloria Guevara, oo ah maamulaha guud ee shirkadda Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka (WTTC). Waxay ka soo duushay gurigeeda oo ku yaal Madrid, Spain.
Isagoo matalaya xubnaha ugu waaweyn warshadaha gaarka loo leeyahay ee adduunka, WTTC ayaa kaalin muhiim ah ku leh astaanta in qaybta gaarka ah iyo tan guud ee warshadaha socdaalku ay ku xidhan yihiin.
Maqnaanshaha hoggaanka ee UNWTO, WTTC waxay awoodday inay keento hoggaamiyeyaal badan oo ka socda waaxda dadweynaha si ay uga soo qaybgalaan shirka toddobaadlaha ah ee ku saabsan masiibada COVID.
Maribel Rodriguez waxay ku biirtay WTTC 2014. Waxay ka dhistay shabakad ballaaran gudaha warshadaha Socdaalka iyo Dalxiiska ee dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay, waxay urursatay in ka badan 20 sano oo iib ah, suuqgeyn, isgaarsiin, iyo waayo -aragnimo ganacsi ee Yurub iyo Laatiin Ameerika ee xagga duulimaadka iyo warshadaha soo -dhoweynta.
Waxay ahayd Maareeyaha Ganacsiga Fulinta iyo Xubinta Guddiga ee Travelodge Hotels Spain laga bilaabo 2008 ilaa 2014.
Intaas ka hor, waxay ku qaadatay 11 sano warshadaha duulista, iyada oo heshay khibrad ballaaran dhammaan dhinacyada duulista ganacsiga, maareynta kuwa kale hordhaca hawlgallada duulimaadyada jaban ee suuqa Koonfurta Yurub ee Virgin Express, Go-Fly, EasyJet, iyo Ryanair. Waxay sidoo kale u shaqaysay British Airways oo u shaqaysay Spain, Portugal, iyo France. Maribel wuxuu MBA -ga Fulinta ka haystaa Dugsiga Ganacsiga ICADE, Shahaadada Cilmu -nafsiga Warshadaha ee Jaamacadda Salamanca, wuxuuna haystaa Barnaamij Sare oo Fulineed ee Safarka & Dalxiiska IESE & JSF. Waxay ku hadashaa Ingiriis si fiican, Boortaqiis, iyo heer wanaagsan oo Faransiis iyo Dutch ah.
Maribel waa muwaadinkii ugu horreeyay ee Isbaanish ah ee haysta jagadan fulinta ee Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka.
Maribel ma uusan dooneynin inuu ku daro jahwareerka ka soo kordhay Hoteelka Ritz Carlton ee Riyadh. Ma aysan doonayn inay qayb ka noqoto ciyaarta qaylada, mana aysan doonayn inay ceebeyso martigeliyaha - Dowladda Sacuudi Carabiya.
Ka dib markii loo sheegay in aan hadda la soo dhaweyn, waxay ku raaxaysatay tas -hiilaadka aadka u wanaagsan Ritz Carlton Riyadh halkii hoteel. Wali waxay soo bandhigtay bandhigeedii koobnaa oo mar walba la qorsheyn jiray maalinta xigta.
Maxay Anita Mendiratta dacaayaddeeda twitter -ka shalay ugu muhiimday?
Dabcan, wadahadalada lacagta -sidoo kale UNWTO -iyo lacagta dalxiiska ayaa maalmahan ka imanaysa Sacuudi Carabiya.
Iyada oo agaasimihii hore ee WTTC Gloria Guevara uu hadda u shaqeynayo Dowladda Sacuudi Carabiya, Zurab waa inuu hagaajiyaa xaaladda uu ku keenay Riyaad.
La -taliyaha sare iyo saaxiib gaar ah oo u dhow Xoghayaha UNWTO Zurab Pololikashvili waa la -taliye Koonfur Afrika ah (oo hadda fadhigeedu yahay London) Anita Mendiratta. Anita ayaa sidoo kale ahayd lataliyaha ugu sarreeya Dr. Taleb Rifai, oo ahaa Xoghayihii hore ee UNWTO.
Dhanka kale Dr. Taleb Rifai ayaa la maqlay isagoo ka soo horjeeda Zuraab Pololikashvili si guud.
Anita waxay ahayd qofkii si aamusnaan ah u abaabulay kulan dhex maray Zurab Pololikashvili iyo Julia Simpson dhawr bilood ka hor ka hor inta Julia aysan ka bilaabin shaqadeeda WTTC.
Kulankan wuxuu ka dhacay maqaayad raaxo leh oo ku taal London bishii Maajo waxyar kadib markii WTTC ay ku dhawaaqday magacaabista Xubinta Guddiga Fulinta ee Kooxda Duulimaadyada Caalamiga ah (IAG), Julia Simpson, iyada oo ah Madaxweyne iyo Agaasime guud, laga bilaabo Ogosto 15.
Julia weli uma shaqayn WTTC, laakiin waxay u shaqaynaysay IAG, markay la kulantay Zurab. Waxa kale oo aan loo sheegin shaqadeeda cusub ee ah Maamulaha Guud ee Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka.
Dabcan, Julia ma aysan ogeyn xiisadda u dhexeysa UNWTO iyo WTTC waxaana sawirka ku xirnaa Anita Mendiratta muddo ku dhow 4 bilood ka hor intaysan Zurab iyo Anita labaduba tweet -gareysan - sabab aad u kala duwan.
UNWTO isku day been abuur ah oo lagu hagaajinayo xiriirka WTTC
Iska indho -tirida sanadaha isgaarsiinta iyo dhaqdhaqaaqyada la aasaasay maamulladii hore ee UNWTO, iyo marin habaabinta dadweynaha ee dhajinta tweet -kaan oo leh sawir duug ah, ayaa mar kale tusaale caadi ah u ah sida Xog -hayaha Guud uu u khiyaameynayo waddada uu u socdo. Kani wuxuu ka soo bixi karaa filim James Bond.
Qoraagan ayaa ka jawaabay bartiisa twitter -ka ee ay soo dhigtay Anita Mendiratta isagoo leh:
Si xushmad leh oo dhan Anita, tani waa boosteejo dacaayad raqiis ah.
Ka dib muuqaalka Zurab wuxuu sababay Sacuudi Carabiya, aad bay u caddahay inuu neceb yahay WTTC wuxuuna dareemayaa inay ku hanjabayaan inay samaynayaan wax la taaban karo oo ay ku jiraan waaxda dawliga ah. Miyaan ku qasbanahay inaan sheego wax badan?
Oktoobar 21, 2021 at 01: 35